Inicio » AmaSelula » I-iPhone ehamba phambili emakethe: iyiphi okufanele ngiyithenge?
107 Ukubukwa 0
I-Apple ingumkhiqizi owaziwa ngekhwalithi ephezulu yamadivayisi ayo, futhi abasebenzisi abaningi abaluyeki uhlelo lokusebenza lwe-iPhone, i-iOS, ukuze bafake esikhundleni se-Android engcono kakhulu ekhona emhlabeni.
Uma ungumuntu oshisekayo we-iPhone ofuna imodeli engcono, noma ufuna ukwazi ukuthi ngobani abahamba phambili, lapha sesiqoqe ama-smartphones aphezulu ayi-5 e-Apple kuze kube manje (empeleni kukhona ama-smartphones ayi-8, ngoba sihlanganise amamodeli ahlukene kuphela. ngosayizi, njenge-iPhone XS ne-iPhone XS Max, ngale komugqa we-iPhone 11).
Ama-smartphones amahle kakhulu we-Apple
Lolu hlu luzobuyekezwa njalo ukuze uzohlala unama-iPhones angcono kakhulu akhishwe i-Apple. Kwamanye amazwe aseLatin America, isibonelo, inketho engcono kakhulu ukuthenga ama-iPhones ezizukulwaneni ezi-2 noma ezi-3 ezedlule, njengoba elula kakhulu ngokwezindleko/inzuzo.
1. I-iPhone 11, i-iPhone 11 Pro ne-iPhone 11 Pro Max
Ama-iPhones akamuva ngokuvamile ahamba phambili. Ulayini 11 wawunempikiswano, nesethi yekhamera eyayibhekwa njengenqaba ngokuba nebhulokhi yamalensi amathathu angalingani. Le block igcine isiyindinganiso yokusetshenziswa kwamanye ama-smartphone akhishwe kamuva.
I-Apple iPhone 11, 64GB, Emnyama (Ivuselelwe kabusha)
Bona intengo ku-Amazon
I-Apple iPhone 11 Pro, 256GB, Space Grey (Ilungisiwe)
5.8-intshi Super Retina XDR OLED ukubonisa
Ukumelana namanzi nothuli (4 amamitha kufika kumizuzu engama-30, IP68)
12 Mpx uhlelo lwekhamera kathathu olune-engeli ebanzi, i-ultra wide angle kanye ne-telephoto; Imodi yasebusuku, Imodi yokuma ngobude nevidiyo engu-4K efika ku-60 f/s
I-Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Igolide - Ayivuliwe (Ilungisiwe)
6.5-intshi Super Retina XDR OLED ukubonisa
Isibuyekezo sokugcina ngo-2022-06-28 / Izixhumanisi ezihambisanayo / Izithombe ezivela ku-API Yokukhangisa Yomkhiqizo we-Amazon
I-Apple iPhone 11 Pro Max yethulwe ngoSepthemba 2019. Ifike ne-Apple A13 Bionic chipset, i-Apple GPU, iMemory set: 64GB kanye no-6GB RAM, 256GB kanye no-6GB RAM, 512GB kanye no-6GB RAM.
Ibhethri ingu-3500 mAh. Isikrini esingu-6.5, esinokulungiswa kwamaphikseli angu-1242 x 2688 kanye nokuminyana kwephikseli okungu-456 ppi, sisebenzisa ubuchwepheshe be-OLED obunokuvikela ingilazi engaklwebheki.
Amakhamera yilawa: 12 MP, f/1.8 + 12 MP, f/2.0, 52 mm (telephoto) 2x i-zoom optical + 12 MP, f/2.4, 13 mm (ultrawide). Ikhamera yangaphambili engu-12MP, f/2.2.
2. I-iPhone XS Max ne-iPhone XS
Sibeka la madivayisi womabili endaweni efanayo ngoba ayafana, lokho okushintshayo kuyizingxenyana ezimbalwa ze-intshi esikrinini, kodwa ake sikhulume ngalokhu ngokwehlukana.
I-Apple iPhone XS 64 GB Space Grey (Ilungisiwe)
isibonisi se-super retina; 5,8-intshi (diagonal) OLED multi-touch display
ubuso-id; sebenzisa i-id yobuso ukuze ukhokhe ezitolo, izinhlelo zokusebenza namakhasi ewebhu nge-iphone yakho
I-Apple iPhone XS Max 64 GB Gold (Ilungisiwe)
isibonisi se-super retina; 6,5-intshi (diagonal) OLED multi-touch display
Okugqamile kokukhishwa kwakamuva kwe-Apple ngokungangabazeki i-iPhone XS Max. I-XS Max inombukiso we-Super Retina OLED ongu-6.5-intshi, kufreyimu engu-6.2 x 3.1 x 0.3-intshi, esekelwa yi-Dolby Vision, enemibala egqamile futhi ebukhali.
Womabili la madivayisi afika afakwe i-chipset ye-A12 Bionic enamandla, kanye nokuba ne-4GB ye-RAM. Kukhona nenzwa ye-TrueDepth ye-Facial ID esheshayo kanye nokuvula i-Animoji. Amakhamera amabili angemuva anikezela ngemodi yokusondeza engu-2x ne-portrait.
I-iPhone XS ilingana neyandulelayo i-iPhone X, inesikrini esingu-5,8-intshi, esingakhukhumele njengengane yakwethu engu-6,5-intshi i-XS Max, kodwa iseyinhle ngokubuka amavidiyo noma ukudlala imidlalo.
3. I-iPhone XR
I-iPhone XR iyindlela enhle kulabo abangafuni (noma abangakwazi) ukukhokha intengo ye-iPhone XS, kodwa abasafuna idivayisi ethuthukisiwe.
Lena i-iPhone "eshibhile" ye-Apple phakathi kwaleyo esanda kwethulwa, kanye nokuba yidivayisi engcono kakhulu ohlwini ngokwempilo yebhethri futhi ibe nemibala ehlukene, njengoluhlaza okwesibhakabhaka, omhlophe, omnyama, ophuzi, wamakhorali nobomvu, uma kuqhathaniswa neminingi. imibala edumile. I-iPhone XS ethambile ne-iPhone XS Max.
I-Apple iPhone XR 64 GB Emhlophe (Ivuselelwe kabusha)
6,1-intshi (diagonal) isikrini se-LCD sokuthinta okuningi esinobuchwepheshe be-IPS
Kodwa umehluko omkhulu phakathi kwe-XR ne-XS/XS Max ubuhle kakhulu, ngoba banokufana okuthile okubalulekile: I-chipset ye-Apple ye-A12 Bionic esheshayo namakhamera amabili ngemuva.
Ngamafuphi, i-iPhone XR ishibhile, inemibala eminingi, inesikrini esikhulu esingu-6.1-intshi, esingabonakala njengendawo ephakathi phakathi kwe-iPhone XS ne-XS Max. Lesi sikrini sanele abantu abaningi, ikakhulukazi labo abangagcizeleli esikrinini se-OLED.
4. I-iPhone X
I-iPhone X kwakuyithuluzi elibiza kakhulu elake lakhishwa yi-Apple, ngaphambi kokuthi i-iPhone XS Max ivele ngonyaka olandelayo. Ukufika kwalokhu kuphinde kwaphawula isinqumo sika-Apple sokuyeka ukuthengisa i-iPhone X esitolo sayo esisemthethweni, nakuba ungathola idivayisi ethengiswayo kwezinye izitolo.
I-Apple iPhone X 64GB Silver (Ivuselelwe kabusha)
Ngomklamo omuhle, ocishe ungabi nafreyimu kanye nobuchwepheshe obuphambili kunabo ongabusebenzisa, i-iPhone X iseyinketho enhle. Okuvelele kufaka phakathi ikhamera enhle enelensi yocingo, impilo yebhethri ehlaba umxhwele, kanye nokuphepha kwe-Face ID, okukuvumela ukuthi uvule i-smartphone yakho usebenzisa ubuso bakho.
5. I-iPhone 8/8 Plus
Uma uthanda izikrini ezinkulu kodwa ungenazo izinsiza ezanele zokutshala imali ku-iPhone XS Max noma i-iPhone XR, inketho enhle ukuthenga i-iPhone 8 Plus. Noma uma ubona isikrini esincane, kodwa okukukhathazayo kakhulu yizindleko ngaphandle kokudela ukusebenza, i-iPhone 8 iyisinqumo esilula.
I-Apple iPhone 8 64GB Space Grey (Ilungisiwe)
I-Apple iPhone 8 Plus 256GB Space Grey (Ilungisiwe)
Isibonisi esingu-5,5-intshi (diagonal) sesikrini esibanzi se-LCD Multi-Touch esinobuchwepheshe be-IPS
I-ID yokuthinta. Sebenzisa i-Touch ID ukuze ukhokhe ezitolo, izinhlelo zokusebenza namawebhusayithi nge-iPhone yakho
Zombili zikhishwe ngo-2017, kanye ne-iPhone X, futhi zingamamodeli anamandla kakhulu anomklamo wenkinobho yasekhaya yakudala. Eqinisweni, abasebenzisi abaningi basakuthola kulula ukuzulazula ku-iPhone ngenzwa yezigxivizo zeminwe nenkinobho yasekhaya.
Lo mklamo usiza ukusheshisa imisebenzi yakho ngokwenza izinto eziningi, futhi i-iPhone 8 iyisandla esisodwa ngempela, ngenxa yesikrini esincane nezici zokufinyeleleka. Futhi, amandla okucubungula namakhamera ahlala enokuncintisana.
Gwema lawa ma-iPhone
I-iPhone 6S, i-iPhone SE nangaphambilini
I-iPhone 6S/6S Plus ne-iPhone SE, nawo wonke amanye ama-iPhones angaphambi kwawo, kungenzeka atholakale ezitolo futhi aphinde asetshenziswe, kodwa awasakufanelekeli. Abanawo amandla okucubungula okulandelela izinhlelo zokusebenza nezibuyekezo zeminyaka ezayo ngendlela egculisayo. Futhi awakwazi ukungena emanzini, futhi ubuchwepheshe bekhamera yawo abucwengeki njengamamodeli amasha.
Njengoba i-Apple ingasazithengisi, ungakhetha ukumisa izibuyekezo zesofthiwe nganoma yisiphi isikhathi iminyaka ezayo. Ngaphandle uma uthola ithuba lokuthenga enye yalezi zinhlobo ezindala ngemali encane kakhulu, i-iPhone 7 noma entsha ikufanele kakhulu ukutshala imali kuyo.
I-NVIDIA Yengeza Ompetha Be-Roller neminye Imidlalo engu-9 ku-GeForce MANJE
I-Etiquetas: i-apula i-apula
Lithini izinga lesampula lokuthinta iselula?
4 omakhalekhukhwini bemidlalo ezofika ne-Snapdragon 8+ Gen 1
I-OnePlus ifuna ukubuyela ezimpandeni zayo nge-10T
I-iPhone 14 Max ibambezelekile ekukhiqizeni futhi izoba nesitoko esilinganiselwe